Empowering Cloghers (Fandrisihana ny Bilaogera Vehivavy)! · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Jolay 2014 9:17 GMT
Fitaovana mahatalanjona handresena ireo sakana ara-pifandraisana sy hifandraisana amin'ny olona vaovao manana hevitra sy lanja samihafa ao amin'ny firenena sy iraisam-pirenena ny aterineto. Mbola an-dalam-pandrosoana ny fidirana amin'ny aterineto ao Kambodzja, indrindra any amin'ny faritra ambanivohitra. Na dia eo aza ny fahavitrihana lehibe miditra aterineto eo amin'ny tanora Kambodziana, indrindra ao amin'ny media sosialy. Fantatray tamin'ny alalan'ny fampiasanay manokana ny fitaovana antserasera tahaka ny Facebook, YouTube sy ny Bilaogy Sithi Blog fa te-hahita fanovana eo amin'ny tontolon'ny zon'olombelona ao Kambodza ny tanora, ary handray fepetra antserasera mba hanohana ny ezaka ataontsika ho tonga amin'izany. Miainga amin'izany fahavitrihana izany ny Tetikasa Empowering Cloghers, ary hanome fahafahana hoan'ny vehivavy ho lasa mpitarika izany fanovana izany.
Vao manomboka ny tetikasa Empowering Cloghers ary eo ampanangonana tovovavy handray anjara amin'ny fiofanana izahay. Nanana valiny mampitolagaga amin'ity fiofanana ity izahay hatramin'izao ary mampientanentana ny mahita tanora vehivavy marobe tahaka izao maniry hianatra fomba vaovao mba hanehoan'izy ireo hevitra sy hitaona tsara ny fiarahamonina Kambodziana. Hanomboka atsy ho atsy ny fiofanana ary hanolotra fandaharam-potoana efatra. Sy fananganana ny bilaogin'izy ireo manokana ihany koa, hifandray amin'ny fiarahamonina Clogher ireo mpiofana ao aminay mba hahazoan'izy ireo fifanohanana hanohizan'izy ireo ny “clogging” rehefa vita ny tetikasa. Hanoratra lahatsoratra hoan'ny Bilaogy Sithi ihany koa izy ireo izay tafiditra ao anatin'ny fiofanan'izy ireo ary hanasa azy ireo izahay mba handray anjara ho vahiny asaina amin'ny “clogher” manaraka.